यहाँ विहीबार गर्न नहुने भनेर उल्लेख ५ कुराको चर्चा गरिएको छ: कपाल नुहाउनु हूँदैन शास्त्रा विहीबार कपाल नुहाउन नहुने उल्लेख छ । खासगरी महिलाहरुले विहीबार कपाल नुहाउनु अशुभ मानिन्छ । महिलाको जन्मकुण्डलीमा वृहस्पति पतिकोरुपमा रहने हुँदा यो दिन कपाल नुहाउनु नराम्रो मानिन्छ । विहीबार कपाल नुहाउँदा पति र सन्तानलाई अशुभ
बिहिबारको दिन भुलेर पनि अरुलाई पैसा सापटी दिनुहुदैन ! जानी राखौ
कुनै नयाँ कार्य गर्दा हामिले एकपटक सोचबिचार गरेरै गर्नु राम्रो हुन्छ । जे कार्य पनि हतारमा गर्दा कार्य सफल नहुन सक्छ । त्यसैले कुन बार कस्तो कार्य गर्दा सफल भइन्छ भन्ने कुरा हामिलाई थाहाँ हुनु जरुरी छ । बेलैमा कस्तो कार्य गर्दा सफल भइन्छ भन्ने कुरा जानकारी भएमा आइपर्ने समस्याबाट
मेष सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि वर्चस्व स्थापना गर्न सकिने दिन छ । साथीभाइ, बन्धुवान्धव र इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ । अविवाहितहरूमा विपरीतलिङ्गीबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । परिश्रमका माध्यमबाट आम्दानी बढ्नेछ । दिउँसोबाट राज्यभावमा चन्द्रमा जाने भएकाले सामाजिक र सरकारी गतिविधिमा सक्रिय भइनेछ । बृष भाग्यबलमा अभिबृद्धि हुनेछ ।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले बिहीबार गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा–आराधना गर्ने गर्दछन् । आजको दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ । यो दिन पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको दान गरेमा शौभाग्य मिल्ने विश्वास छ । साथै, यो दिन विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीको पनि पूजा गरिन्छ
हेर्नुस माघ ९ गते बिहीबारको पञ्चाङ्ग र राशिफलसँगै पाथिभारा माताको दर्शन गरौं !
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – बल तथा पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । साथीभाईहरुको साथ सहयोगमा जटिलकार्यहरु सम्पादन हुनेछन । धार्मीक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रको लापरवाहिले माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबनाका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य अपजसको सामना गर्नु पर्ला । भौतिक साधनका
बालिका भेटिएको हुदा आफ्नै छोरी सम्झेर सेयर गरिदिनु होला ताकी परिवार सम्म पुगोस ! आफ्नै छोरी चेली सम्झेर यो सुचना सेयर गरिदिनुहोला । ताकी परिवारसंग भेट होस बालिका फेला परेको सूचना एक्लै रुँदै हिँडेको अवस्थामा रोजिता नाम बताउने नानी फेला परेको हुँदा निज लाई चिन्नु हुने वा आफन्तले बनेपा ईलाका
यस्तो अच्चम्मको मन्दिर जहाँ मागेको सबै पुरा हुन्छ ! जानी राखौ
लमजुङ जिल्लाको मध्य नेपाल नगरपालिकामा एउटा इशानेश्वर महादेव मन्दिर छ । उक्त शिव मन्दिरमा शिवरात्रीमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ । सो मन्दिरलाई सन्तानेश्वर महादेव पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालमा इशानेश्वर एक मात्र यस्तो मन्दिर हो जहाँ रातभरी उठेर ठाडाबत्ती बाल्यो भने सन्तान प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । मन्दिरका पुजारी
शनिवारको दिन शनिदेवको विशेष दिन हो । शनिदेवलाई न्यायका देवता मानिन्छ । शनिबार शनिदेबको दिन भएकाले आज शनिदेवका विरोधी काम गर्न राम्राे मानिदैन् । आज शनिदेबलाई प्रसन्न गर्ने काम गनूपर्छ । जस्तै शनिलाई प्रसन्न गर्नका लागि यस दिन सर्सिउको तेल, कालो तिल आदी चढाइन्छ । ज्योतिषीय मान्यता अनुसार जसकोे कुण्डलीमा
बिहिबारको दिन भुलेर पनि गर्न नहुने यी काम ! नत्र जीवनभर पछुताउनु पर्ला
बिहिबारलाई धार्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टीले महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहिबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने विश्वास रहेकाे छ तर बिहिबार केही काम गर्न भने निषेध गरिएको छ । शास्त्रमा बिहिबार कपाल नुहाउन नहुने उल्लेख छ । खासगरी महिलाहरुले